ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးတာ တနှစ်ရှိလာချိန်မှာ ဒီရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေ ရလာပြီဖြစ်ပေမယ့် စိုးရိမ်စရာကောင်းအောင် ကူးစက်မြန်တဲ့ ဗီဇပြောင်းပိုးသစ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီပိုးသစ်တွေ အကြောင်း အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်က ပြောပြ ပေးမှာပါ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးတာ တနှစ်ရှိလာချိန်မှာ ဒီရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေ ရလာပြီဖြစ်ပေမယ့် စိုးရိမ်စရာကောင်းအောင် ကူးစက်မြန်တဲ့ ဗီဇပြောင်းပိုးသစ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီပိုးသစ်တွေ အကြောင်း အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးပါ့မယ်။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. “ SARS-CoV-2 ရဲ့ gene မျိုးဗီဇကို တွေ့တာက ၂၀၁၉ မှာ ဒီဇင်ဘာမှာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ စတွေ့ခဲ့တာ။ အဲဒါက နေပြီးတော့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ လောက်မှာ ဥရောပမှာ စပြီးတော့ ပြန့်တယ်။ ၂၀၂၀ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ အသွင်ပြောင်း mutation တခု ထွက်လာတယ်။ ဒါက D614G ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီကနေ ၂၀၂၀ ဇွန်လလောက်မှာ WHO ကနေကြေညာတယ်။ တကမ္ဘာ လုံးမှာ ပြန့်နေပြီ။ ဒီ D614G mutation ပေါ့။ မျိုးဗီဇပြောင်းသွားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားက တကမ္ဘာလုံးကို ပြန့်သွားပြီ ဆိုပြီးတော့။
အဲဒီကနေမှ နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ sequencing လုပ်တယ်။ မူလ အနေထားဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာ သိအောင် လုပ်တော့ သြဂုတ်လ လောက်မှာ ဒီ D614G အမျိုးအစားက မြန်မာပြည်မှာ ရောက်နေပြီ ဆိုပြီးတော့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ကြေညာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးကို ပြန့်နေပြီပေါ့နော်။ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့တဲ့ ဗီဇပြောင်းတဲ့ဟာက ကျန်တာတွေကို သူတို့ ဆက်ပြီးတော့ sequencing လုပ်၊ ဆက်ပြီးတော့ ရှာဖွေရအုံးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ D614G တွေ့ရပြီး အဲဒီကနေ ပြီးသွားချိန်မှာ ဘယ်မျိုးစိတ် - ဘယ်မျိုးဗီဇပြောင်းတယ် ဆိုတဲ့ဟာကို မတွေ့ရသေးဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကရော၊ တရားဝင် ကြေညာတာ မရှိသေးပါဘူး။”
မေး။. ။“ဒီဗြိတိန်မှာ တွေ့တဲ့ ပိုးမျိုးနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ဆက်ပြောင်းလဲတာ တွေ့ရလဲ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဗြိတိန်ဖြစ်တဲ့ဟာက သူစပြီးတော့ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲတာကို တွေ့တာက စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ မှာ စတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ နောက်ဆက်တွဲသူတို့ ဒီဟာကို လိုက်စစ်တဲ့အခါမှာ မျိုးဗီဇပြောင်းတဲ့ strain မျိုးကွဲ ကို သူတို့ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှာ သူတို့ တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။ အခုထိတော့ ဆက်ပြီးတော့ ရှာနေတုန်းပဲပေါ့။ ဘယ်နားတွေမှာ ရှိမလဲ ဆိုတာ ဆက်ပြီး ရှာနေတုန်းပဲ။
သူက ၃၀% ကနေ ၅၀ % အထိ ကူးစက်မြန်တယ်ပေါ့နော်။
၃၀ ကနေ ၅၀ % ဆိုတာက - တကယ်လို့ ၅၀ % ပိုပြီး ကူးနိုင်တယ် ဆိုတာက- ၂ ဆခန့် ပိုပြီးတော့ ကူးနိုင်တယ် ဆိုတာပါ။ အဲဒီ ဗြိတိန်မှာ တွေ့ရတဲ့ total mutation က ၂၃ ခု ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီကနေ ထပ်ပြီးတော့ ဖြစ်သွားတာကတော့ တောင်အာဖရိက mutant ရှိတယ်။ ဘရာဇီးလ် mutant ရှိတယ်။ အခု နောက်ဆုံး ကယ်လီဖိုးနီးယား mutant ရှိတယ်ပေါ့။
တောင်အာဖရိက mutant ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အဓိက အရေးကြီးတာက spike mutation ပေါ့။ spike mutation ဆိုလို့ရှိရင် spike ရဲ့ ပရိုတိန်းပေါ့နော်။ ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ဆူးချွန်လေး ပေါ်မှာ အသွင်ပြောင်းတာ mutation က ရှိတယ်။ အဲဒါက လူရဲ့ လက်ခံနေရာမှာ သွားပေါင်းတဲ့ နေရာမှာ နဲနဲ အပြောင်းအလဲ ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီမျိုးစိတ်အကူးခံရတဲ့ လူမှာ viral Load က ပိုမြင့်တယ်လို့ အခု လောလောဆယ် လေ့လာတွေ့ရှိထားတယ်။ ဒီဟာရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာလဲ ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ ကူးစက်မြန်နိုင်တယ် ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူတို့ ဒါကို လေ့လာချက် ထပ်လုပ်ရအုံးမယ်။”
မေး။. ။“ဒါက တောင်အာဖရိက ဗီဇပြောင်းမျိုးသစ်ပေါ့။ နောက် ဘရာဇီးလ် ကကျတော့ရော။“
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဘရာဇီးလ် ကကျတော့ သူလဲ အဲလိုပဲ။ mutation ကတော့ သုံးခု- သုံးနေရာလား မသိဘူးရှိတယ်။ အဲဒီမှာက spike mutation က အာဖရိကက ပြောင်းတာနဲ့ တူတူပဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့ရဲ့ အခြေနေကလည်း တူတူပဲလို့ ထင်ရတယ် ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘာတွေ သက်ရောက်မှုရှိမယ်၊ ကွာအုံးမလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရအုံးမယ်။ ဒီဘရာဇီးလ်မျိုးကတော့ အရင်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ၂၃ ရက် လောက် အတွင်းမှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သူက ဒီ စစ်သမျှ ဟာတွေရဲ့ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အဲဒီ mutant တွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတယ်။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့တွေ့တဲ့ဟာကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား mutant ပေါ့နော်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား mutant ဆိုလို့ရှိရင် သူက bio genome တခုလုံးမှာ ပြောင်းနေတာက ၅ နေရာလောက် ဖြစ်နေတယ်။
ဒီ ကယ်လီဖိုးနီးယား mutant မှာ စပိုက် မြူတေးရှင်းက L452R ပရိုတိန်းရဲ့ ၄၅၂ ခုမြောက် နေရာမှာ သူက L ကနေပြီးတော့ R ကိုပြောင်းတယ်။ ဒီနမူနာ ၄၅၀၀ လောက်ကို စစ်တဲ့ အခါမှာ ၂၄ % မှာ ဒီမျိုးကို တွေ့တယ်ပေါ့။ ဒီ ကယ်လီဖိုးနီးယား mutant ကတော့ အမေရိကန်မှာတွေ့တဲ့ဟာ ပါ။ ဒီ ဇန်နဝါရီမှာ တွေ့တာ။”
မေး။. ။“အခု ဗီဇပြောင်းမျိုးသစ်တွေက ကူးစက်မြန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လောက် ပိုပြီ မြန်ပါသလဲ။ မူလ တွေ့ရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ စာရင်”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ကယ်လီဖိုးနီးယားရယ်၊ တောင်အာဖရိကရယ်၊ ဘရာဇီးလ် ရယ်က ဟာတွေက ကျတော့ လေ့လာနေတုန်းပဲ။ ဗြိတိန် ယူကေက ဟာ ကျတော့ ၂ ဆခန့် ပိုပြီး ကူးနိုင်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။”
မေး။. ။“ဗီဇပြောင်း မျိုးသစ်တွေလည်း ပေါ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် တချိန်ထည်းမှာပဲ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း ပေါ်နေပြီ။ ဒီအခု ပေါ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ဒီဗီဇပြောင်း မျိုးသစ်ကို နိုင်မနိုင် ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အခု ယူကေ ကမျိုးကို ကျတော့ Moderna ကရော Pfizer ကပါ စမ်းနေတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ကတော့ အခြေနေကောင်းတယ် ဆိုပြီး ပြောထားတယ်။ တောင်အာဖရိကဟာကို Moderna က အခုမှ စမ်းနေတုန်း ရှိသေးတယ်။ အတိအကျတော့ ဘာမှ မပြောသေးဘူးပေါ့။ ဘရာဇီးလ်ကဟာကလည်း စမ်းရမယ့်ဟာတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားက ဟာကတော့ သူတို့ အခုမှတွေ့ထားတာ ဆိုတော့ စမ်းတောင် မစမ်းရသေးဘူးပေါ့။ အခု သူတို့ နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ဟာ။”
မေး။. ။“အဲဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်မယ့်ဟာက AstraZeneca ကနေ ထုတ်တာပေါ့နော်။ အိန္ဒိယကနေ ပေးတာ။ ဆိုတော့။ ဒီဆေးကို ထိုးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ သိချင်ကြမှာက ငါတို့ထိုးတဲ့ ဆေးက ကူးစက်မြန် ဗီဇပြောင်းပိုးအတွက်ကော အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတာ။ အဏုဇီဝဗေဒ လေ့လာသူတယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီ AstraZeneca ကနေ ထုတ်တဲ့ ဆေးတွေက ၅၀ % ကနေ ၇၀ % အထိ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုပြီး သူတို့ ပြောထားတယ်။ စိတ်ချလက်ချပဲ ထိုးသင့်တယ်လို့ ပြောရမှာ ပေါ့နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်ဆေးဆိုတာကတော့ တအားကြီး ပြန့်နေတဲ့ဟာနဲ့ ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ နှုန်းတွေကို ထိန်းနိုင်ဖို့ အတွက် ထိုးကိုထိုးပေးရမှာ ပေါ့နော်။”
မေး။. ။“မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံကလည်း သူတို့ဆီကထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ပေးမယ်ဆိုတော့ ဒီတရုတ် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီဗြိတိန်က ထုတ်တဲ့ဟာဆိုရင် လူ၂၄ ၀၀၀ ကျော်လားမသိဘူး စမ်းတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ စမ်းတာက လူကြီးတွေဘယ်လောက်ပါတယ်၊ လူငယ်တွေ. ဘယ်လောက်ပါတယ်။ နောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကလေးတွေဆို မပါသေးဘူး။ ဒါဆိုတော့ အသက် ၁၈ နှစ် အထက်တွေပဲ ထိုးရမယ်။ သူတို့မှာ ဒီလိုမျိုး ဒေတာ လေးတွေ ရှိတယ်။ ဒီ အမေရိကန်ကဆို သူတို့ဟာ သူတို့ ဒေတာ အလိုက်ရှိတယ်။
တရုတ်ကဟာကတော့ သူတို့ရဲ့ နည်းပညာက ကျောက်ကြီး ကာကွယ်ဆေးတွေ ခေတ်တုန်းက လိုပေ့ါနော်။ ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပဲ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ကို chemical နဲ့ inactivate လုပ်ပြီးတော့ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ကို ဖျောက်ပြီးတော့ ပေါ့နော်။ လူထဲကို ထည့်ပေးတာ။ လူဘယ်နှစ်ရောက် စမ်းပြီးပြီ။ နောက် သူတို့ရဲ့ စိတ်ချရမှု၊ ထိရောက်မှုက ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတာတော့ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာသည် လူဘယ်နှစ်ယောက်မှာ ဘယ်လောက် ထိရောက်မှုရှိတယ်။ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ တကယ်လို့ ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုလို့ရှိရင် rate က ဘယ်လောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆေးရုံတက်ရတဲ့အထိ ဘယ်နှစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်ဟာမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက် ရခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း ရခဲ့တယ်။ ဒါမျိုးတွေ။ အဓိက အချက်လက် data တွေ မတွေ့မိဘူး။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျရောဂါ ဖွဈပှါးတာ တနှဈရှိလာခြိနျမှာ ဒီရောဂါအတှကျ ကာကှယျဆေးတှေ ရလာပွီဖွဈပမေယျ့ စိုးရိမျစရာကောငျးအောငျ ကူးစကျမွနျတဲ့ ဗီဇပွောငျးပိုးသဈတှရေဲ့ အန်တရာယျနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒီပိုးသဈတှေ အကွောငျး အဏုဇီဝဗဒေ ပညာရှငျ မခငျဇာဝငျးပွညျ့ကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးပါ့မယျ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. “ SARS-CoV-2 ရဲ့ gene မြိုးဗီဇကို တှတေ့ာက ၂၀၁၉ မှာ ဒီဇငျဘာမှာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံမှာ စတှခေဲ့တာ။ အဲဒါက နပွေီးတော့ ဖဖေျေါဝါရီလ လောကျမှာ ဥရောပမှာ စပွီးတော့ ပွနျ့တယျ။ ၂၀၂၀ ဖဖေျေါဝါရီမှာ အသှငျပွောငျး mutation တခု ထှကျလာတယျ။ ဒါက D614G ဆိုပွီးတော့။ အဲဒီကနေ ၂၀၂၀ ဇှနျလလောကျမှာ WHO ကနကွေညောတယျ။ တကမ်ဘာ လုံးမှာ ပွနျ့နပွေီ။ ဒီ D614G mutation ပေါ့။ မြိုးဗီဇပွောငျးသှားတဲ့ ဗိုငျးရပျဈအမြိုးအစားက တကမ်ဘာလုံးကို ပွနျ့သှားပွီ ဆိုပွီးတော့။
အဲဒီကနမှေ နောကျဆကျတှဲဘာဖွဈလဲ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ sequencing လုပျတယျ။ မူလ အနထေားဘယျလိုရှိတယျ ဆိုတာ သိအောငျ လုပျတော့ သွဂုတျလ လောကျမှာ ဒီ D614G အမြိုးအစားက မွနျမာပွညျမှာ ရောကျနပွေီ ဆိုပွီးတော့ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက ကွညောခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ဆိုရငျ တကမ်ဘာလုံးကို ပွနျ့နပွေီပေါ့နျော။ ဒီ မွနျမာနိုငျငံမှာ တှတေဲ့ ဗီဇပွောငျးတဲ့ဟာက ကနျြတာတှကေို သူတို့ ဆကျပွီးတော့ sequencing လုပျ၊ ဆကျပွီးတော့ ရှာဖှရေအုံးမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ D614G တှရေ့ပွီး အဲဒီကနေ ပွီးသှားခြိနျမှာ ဘယျမြိုးစိတျ - ဘယျမြိုးဗီဇပွောငျးတယျ ဆိုတဲ့ဟာကို မတှရေ့သေးဘူး။ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကရော၊ တရားဝငျ ကွညောတာ မရှိသေးပါဘူး။”
မေး။. ။“ဒီဗွိတိနျမှာ တှတေဲ့ ပိုးမြိုးနဲ့ နောကျပိုငျးမှာ ဘာတှေ ဆကျပွောငျးလဲတာ တှရေ့လဲ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ဗွိတိနျဖွဈတဲ့ဟာက သူစပွီးတော့ မြိုးဗီဇပွောငျးလဲတာကို တှတေ့ာက စကျတငျဘာ ၂၀၂၀ မှာ စတှပေ့ါတယျ။ အဲဒီကနေ နောကျဆကျတှဲသူတို့ ဒီဟာကို လိုကျစဈတဲ့အခါမှာ မြိုးဗီဇပွောငျးတဲ့ strain မြိုးကှဲ ကို သူတို့ နိုငျငံပေါငျး ၅၀ ကြျောမှာ သူတို့ တှခေဲ့ပွီးပွီ။ အခုထိတော့ ဆကျပွီးတော့ ရှာနတေုနျးပဲပေါ့။ ဘယျနားတှမှော ရှိမလဲ ဆိုတာ ဆကျပွီး ရှာနတေုနျးပဲ။
သူက ၃၀% ကနေ ၅၀ % အထိ ကူးစကျမွနျတယျပေါ့နျော။
၃၀ ကနေ ၅၀ % ဆိုတာက - တကယျလို့ ၅၀ % ပိုပွီး ကူးနိုငျတယျ ဆိုတာက- ၂ ဆခနျ့ ပိုပွီးတော့ ကူးနိုငျတယျ ဆိုတာပါ။ အဲဒီ ဗွိတိနျမှာ တှရေ့တဲ့ total mutation က ၂၃ ခု ရှိတယျပေါ့။ အဲဒီကနေ ထပျပွီးတော့ ဖွဈသှားတာကတော့ တောငျအာဖရိက mutant ရှိတယျ။ ဘရာဇီးလျ mutant ရှိတယျ။ အခု နောကျဆုံး ကယျလီဖိုးနီးယား mutant ရှိတယျပေါ့။
တောငျအာဖရိက mutant ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ အဓိက အရေးကွီးတာက spike mutation ပေါ့။ spike mutation ဆိုလို့ရှိရငျ spike ရဲ့ ပရိုတိနျးပေါ့နျော။ ဒီ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ ဆူးခြှနျလေး ပျေါမှာ အသှငျပွောငျးတာ mutation က ရှိတယျ။ အဲဒါက လူရဲ့ လကျခံနရောမှာ သှားပေါငျးတဲ့ နရောမှာ နဲနဲ အပွောငျးအလဲ ရှိတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီမြိုးစိတျအကူးခံရတဲ့ လူမှာ viral Load က ပိုမွငျ့တယျလို့ အခု လောလောဆယျ လလေ့ာတှရှေိ့ထားတယျ။ ဒီဟာရဲ့ အကြိုးဆကျက ဘာလဲ ဆိုတော့ ပိုပွီးတော့ ကူးစကျမွနျနိုငျတယျ ပဲ ရှိသေးတယျ။ သူတို့ ဒါကို လလေ့ာခကျြ ထပျလုပျရအုံးမယျ။”
မေး။. ။“ဒါက တောငျအာဖရိက ဗီဇပွောငျးမြိုးသဈပေါ့။ နောကျ ဘရာဇီးလျ ကကတြော့ရော။“
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဘရာဇီးလျ ကကတြော့ သူလဲ အဲလိုပဲ။ mutation ကတော့ သုံးခု- သုံးနရောလား မသိဘူးရှိတယျ။ အဲဒီမှာက spike mutation က အာဖရိကက ပွောငျးတာနဲ့ တူတူပဲ ဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ သူ့ရဲ့ အခွနေကေလညျး တူတူပဲလို့ ထငျရတယျ ပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ဘာတှေ သကျရောကျမှုရှိမယျ၊ ကှာအုံးမလဲ ဆိုတာကို ကွညျ့ရအုံးမယျ။ ဒီဘရာဇီးလျမြိုးကတော့ အရငျနှဈ ဒီဇငျဘာ ၁၅ ရကျ ၂၃ ရကျ လောကျ အတှငျးမှာ တှခေဲ့တယျ။ အခုဆိုရငျတော့ သူက ဒီ စဈသမြှ ဟာတှရေဲ့ ၄၂ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက အဲဒီ mutant တှခေညျြးပဲ ဖွဈနတေယျ။
နောကျဆုံး အနနေဲ့တှတေဲ့ဟာကတော့ ကယျလီဖိုးနီးယား mutant ပေါ့နျော။ ကယျလီဖိုးနီးယား mutant ဆိုလို့ရှိရငျ သူက bio genome တခုလုံးမှာ ပွောငျးနတောက ၅ နရောလောကျ ဖွဈနတေယျ။
ဒီ ကယျလီဖိုးနီးယား mutant မှာ စပိုကျ မွူတေးရှငျးက L452R ပရိုတိနျးရဲ့ ၄၅၂ ခုမွောကျ နရောမှာ သူက L ကနပွေီးတော့ R ကိုပွောငျးတယျ။ ဒီနမူနာ ၄၅၀၀ လောကျကို စဈတဲ့ အခါမှာ ၂၄ % မှာ ဒီမြိုးကို တှတေ့ယျပေါ့။ ဒီ ကယျလီဖိုးနီးယား mutant ကတော့ အမရေိကနျမှာတှတေဲ့ဟာ ပါ။ ဒီ ဇနျနဝါရီမှာ တှတေ့ာ။”
မေး။. ။“အခု ဗီဇပွောငျးမြိုးသဈတှကေ ကူးစကျမွနျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဘယျလောကျ ပိုပွီ မွနျပါသလဲ။ မူလ တှရေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ နဲ့ စာရငျ”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ကယျလီဖိုးနီးယားရယျ၊ တောငျအာဖရိကရယျ၊ ဘရာဇီးလျ ရယျက ဟာတှကေ ကတြော့ လလေ့ာနတေုနျးပဲ။ ဗွိတိနျ ယူကကေ ဟာ ကတြော့ ၂ ဆခနျ့ ပိုပွီး ကူးနိုငျတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။”
မေး။. ။“ဗီဇပွောငျး မြိုးသဈတှလေညျး ပျေါနပွေီ။ ဒါပမေယျ့ တခြိနျထညျးမှာပဲ ဒီကာကှယျဆေးတှကေလညျး ပျေါနပွေီ။ ဒီအခု ပျေါနတေဲ့ ကာကှယျဆေးတှနေဲ့ ဒီဗီဇပွောငျး မြိုးသဈကို နိုငျမနိုငျ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အခု ယူကေ ကမြိုးကို ကတြော့ Moderna ကရော Pfizer ကပါ စမျးနတေယျ။ သူတို့ အနနေဲ့ကတော့ အခွနေကေောငျးတယျ ဆိုပွီး ပွောထားတယျ။ တောငျအာဖရိကဟာကို Moderna က အခုမှ စမျးနတေုနျး ရှိသေးတယျ။ အတိအကတြော့ ဘာမှ မပွောသေးဘူးပေါ့။ ဘရာဇီးလျကဟာကလညျး စမျးရမယျ့ဟာတှေ ရှိနသေေးတယျ။ ကယျလီဖိုးနီးယားက ဟာကတော့ သူတို့ အခုမှတှထေ့ားတာ ဆိုတော့ စမျးတောငျ မစမျးရသေးဘူးပေါ့။ အခု သူတို့ နောကျဆုံးတှထေ့ားတဲ့ဟာ။”
မေး။. ။“အဲဒီမှာ မွနျမာနိုငျငံကို ရောကျမယျ့ဟာက AstraZeneca ကနေ ထုတျတာပေါ့နျော။ အိန်ဒိယကနေ ပေးတာ။ ဆိုတော့။ ဒီဆေးကို ထိုးတဲ့ သူတှအေနနေဲ့ သိခငျြကွမှာက ငါတို့ထိုးတဲ့ ဆေးက ကူးစကျမွနျ ဗီဇပွောငျးပိုးအတှကျကော အဆငျပွရေဲ့လား ဆိုတာ။ အဏုဇီဝဗဒေ လလေ့ာသူတယောကျ အနနေဲ့ ဘယျလို မွငျပါသလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ဒီ AstraZeneca ကနေ ထုတျတဲ့ ဆေးတှကေ ၅၀ % ကနေ ၇၀ % အထိ ထိရောကျမှုရှိတယျ။ ကာကှယျပေးနိုငျတယျ ဆိုပွီး သူတို့ ပွောထားတယျ။ စိတျခလြကျခပြဲ ထိုးသငျ့တယျလို့ ပွောရမှာ ပေါ့နျော။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကာကှယျဆေးဆိုတာကတော့ တအားကွီး ပွနျ့နတေဲ့ဟာနဲ့ ဆေးရုံတကျနရေတဲ့ နှုနျးတှကေို ထိနျးနိုငျဖို့ အတှကျ ထိုးကိုထိုးပေးရမှာ ပေါ့နျော။”
မေး။. ။“မွနျမာနိုငျငံကို တရုတျနိုငျငံကလညျး သူတို့ဆီကထုတျတဲ့ ကာကှယျဆေးကို ပေးမယျဆိုတော့ ဒီတရုတျ ကာကှယျဆေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘယျလိုမွငျပါလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ဒီဗွိတိနျက ထုတျတဲ့ဟာဆိုရငျ လူ၂၄ ၀၀၀ ကြျောလားမသိဘူး စမျးတယျပေါ့နျော။ အဲဒီမှာ စမျးတာက လူကွီးတှဘေယျလောကျပါတယျ၊ လူငယျတှေ. ဘယျလောကျပါတယျ။ နောကျ ကိုယျဝနျဆောငျတှေ ကလေးတှဆေို မပါသေးဘူး။ ဒါဆိုတော့ အသကျ ၁၈ နှဈ အထကျတှပေဲ ထိုးရမယျ။ သူတို့မှာ ဒီလိုမြိုး ဒတော လေးတှေ ရှိတယျ။ ဒီ အမရေိကနျကဆို သူတို့ဟာ သူတို့ ဒတော အလိုကျရှိတယျ။
တရုတျကဟာကတော့ သူတို့ရဲ့ နညျးပညာက ကြောကျကွီး ကာကှယျဆေးတှေ ခတျေတုနျးက လိုပေ့ါနျော။ ဒီ ဗိုငျးရပျဈကိုပဲ ရောဂါဖွဈစတေဲ့ ဓါတျကို chemical နဲ့ inactivate လုပျပွီးတော့ ရောဂါဖွဈစတေဲ့ ဓါတျကို ဖြောကျပွီးတော့ ပေါ့နျော။ လူထဲကို ထညျ့ပေးတာ။ လူဘယျနှဈရောကျ စမျးပွီးပွီ။ နောကျ သူတို့ရဲ့ စိတျခရြမှု၊ ထိရောကျမှုက ဘယျလောကျ ရာခိုငျနှုနျး ဆိုတာတော့ ပွောထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဟာသညျ လူဘယျနှဈယောကျမှာ ဘယျလောကျ ထိရောကျမှုရှိတယျ။ ဘယျလောကျရာခိုငျနှုနျးရှိတယျ။ တကယျလို့ ကာကှယျဆေးကွောငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး ဖွဈခဲ့တယျ ဆိုလို့ရှိရငျ rate က ဘယျလောကျ ဖွဈခဲ့တယျ။ ဆေးရုံတကျရတဲ့အထိ ဘယျနှဈယောကျ ဖွဈခဲ့တယျ။ ဘယျဟာမြိုး ဘယျနှဈယောကျ ရခဲ့တယျ။ ဘယျလောကျ ရာခိုငျနှုနျး ရခဲ့တယျ။ ဒါမြိုးတှေ။ အဓိက အခကျြလကျ data တှေ မတှမေိ့ဘူး။